Ikhaya Elihle Elilungisiwe I-Fundy Bay - I-Airbnb
Ikhaya Elihle Elilungisiwe I-Fundy Bay
Back Bay, New Brunswick, i-Canada
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Susan
Ikhaya lethu elihle elinezitezi ezimbili lintofontofo futhi liyabukeka. Itholakala nje ngezinyathelo ukusuka ethekwini elihle laseFundy eliziqhenya ngamagagasi aphakeme kakhulu emhlabeni. Ikhaya alinantuthu nombono ovulekile ovulekile nazo zonke izinsiza zasekhaya.
Indawo inomqondo ovulekile, ihlanzekile futhi inomoya, indawo enhle yeholide yomndeni, abahambi bebhizinisi, noma abazali abadinga nje ukubaleka ezinganeni. Umphakathi ungabantu abangajwayelekile, abanobungane kakhulu lapho ukudoba kuwumsebenzi wansuku zonke kungakhathaliseki ukuthi kuwumsebenzi noma ukuzijabulisa.
4.71 · 63 okushiwo abanye
Ngenxa yokuthi siqhelelene nolwandle, ungakwazi ukuhambahamba endaweni, ujabulele abantu bendawo abanobungane, ube nomlilo webhomu ogwini lolwandle, uhambe ngebhayisikili ukuya endlini yezibani eGreens Point, uhambele i-Blueberry Festival namakhonsathi angaphandle phakathi nesizini. Bheka ividiyo ye-Bay of Fundy ku-Vimeo futhi ukucinga I-Bay of Fundy Iqala Lapha, ukubuka konke okuhle kwendawo yethu! Cishe ukumizuzu engama-30 ukusuka e-St. Andrews, N.B. esanda kuvotelwa "Indawo Engcono Kakhulu ECanada"
Okuvela Kuphephandaba Lendawo:
I-Saint Andrews, N.B., iqashelwa inkampani enkulu yezindaba yaseMelika njengendawo engcono kakhulu eCanada ongayivakashela.
"Besingomunye wemiphakathi emincane, uma bekungewona omncane, okhethwe kwabayi-10 abahamba phambili," kusho iMeya uDoug Naish ku-Shift NB.
"Ngakho-ke, besivele sibhekene naleyo nkinga, kodwa kwabonakala kungeyona into embi."
I-Saint Andrews ibone unyaka werekhodi kwezokuvakasha, kusho imeya
Ababhali bezokuvakasha bomncintiswano we-USA Today Best Destination in Canada bakhethe izindawo ezingu-10 eziphezulu kwase kuthi umphakathi uvotele intandokazi yabo, kuchaza uNaish.
"IQuebec City cishe ibiyimbangi yethu enkulu kuwo wonke umqhudelwano," kusho yena.
Inhloko-dolobha yaseQuebec yaqedwa endaweni yase-seond. Eminye imiphakathi eqede kwabayi-10 ephezulu kwakuyiLunenburg, N.S., Saskatoon kanye neMontreal.
U-Naish ubonge umphakathi ngokuvota emqhudelwaneni, kodwa waphinde wakhuthaza abanye ukuthi bavotele i-Saint Andrews.
Muva nje izakhamuzi zizwa ngokunqoba komncintiswano ngesikhathi somcimbi wokuqopha umgwaqo omkhulu kunawo wonke emphakathini.
Njengoba i-USA Today inabafundi abaningi, uNaish uthe ukuqokwa njengendawo engcono ongayivakashela kufanele kube nomthelela omuhle emphakathini nasesifundeni.
“Kuzoba nabantu abaningi, ikakhulukazi abaseMelika, okungenzeka ukuthi abakaze bezwe ngeSaint Andrews noma iCharlotte County,” kusho yena.
"Manje, bazozwa ngayo ngoba kuseduze nasekhaya mayelana nencwadi abayijwayele."
Nakuba ngingeke ngihlasele ubumfihlo bakho ngesikhathi uhlala, ngiyatholakala ukuze ngikusize ngokuphakamisa imisebenzi yasendaweni, izindawo zokudlela, nohambo lwasemini. Ngihlala imizuzu embalwa ukusuka kule ndawo, ungayibona ngempela indlu yami uma ubuka ngaphesheya kwetheku. Ngiyatholakala ukukusiza nganoma iyiphi indlela ezokwenza ukuhlala kwakho kujabulise.
Nakuba ngingeke ngihlasele ubumfihlo bakho ngesikhathi uhlala, ngiyatholakala ukuze ngikusize ngokuphakamisa imisebenzi yasendaweni, izindawo zokudlela, nohambo lwasemini. Ngihlala…